Ungaluthola Kanjani Usizo ku Windows 10? - Pc
Ngokufakwa kwamakhono amasha ngakho konke ukuvuselelwa, kuyasiza ukwazi ukuthi ungaluthola kanjani usizo ku-Windows 10. I-Windows ingenye yezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu; yingakho kunengqondo ngokuphelele ukwenza uhlelo lwabo lokusebenza ukuthola 'usizo.'
Kule ndatshana, sizobe sidingida ukuthi ungaluthola kanjani usizo / usizo kuWindows 10. Izikhathi zeManier, lapho usebenzisa ubuchwepheshe bamuva, uhlelo lwakho lungahlala lubambeke ngenxa yehardware yakudala noma ezinye izizathu; ufuna ukwazi ukuthi ungaluthola kanjani usizo ku-Windows 10. Ungakhathazeki. Kulokhu okuthunyelwe, sizobheka ukuthi singaluthola kanjani usizo ku-Windows 10 bese ukhetha leyo evumelana nenkinga yakho.
Ungaluthola Kanjani Usizo ku Windows 10 - Izindlela Eziningi
1. Ukusekelwa kweMicrosoft
Lapho isistimu yakho ingaphenduli emiyalweni yakho nakunoma iziphi ezinye izimbungulu ohlelweni, ungangena kwi-web ukuthola izimpendulo. IMicrosoft inewebhusayithi eyaziwa njenge https://support.microsoft.com/ . Lapha, uzothola zonke izimpendulo zakho kusuka ku-OS kuye kwimikhiqizo ye-Microsoft kuye emaphethelweni e-Microsoft.
Kufanele ukwazi ukuxazulula inkinga. Qiniseka ukungena ngemvume kwi-akhawunti yakho ebukhoma ye-Microsoft ukugcina wonke amaphutha enzeka ohlelweni lwakho. Esimweni esizayo, uhlangabezana nezinkinga ezifanayo, uzokwazi ukuzixazulula kalula.
2. Thola Usizo Isicelo kumawindi 10
Ungalanda uhlelo lokusebenza olusemthethweni yi-Microsoft ukuthola amaphutha ohlelo. Amakhompyutha amaningi eza nalolu hlelo lokusebenza olufakwe ngaphambilini. Noma kunjalo, uma une-PC eyakhelwe ngokwezifiso, udinga ukulanda uhlelo lokusebenza. Ine-software yosizo ebonakalayo ezokukhombisa ngezinyathelo zokuqeda izinkinga ezibangelwe kusistimu yakho. Ungaxhumana nanoma yiziphi izinkinga obhekana nazo ngezindlela zokuxoxa, njengoba nje wenza kunoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lokuxoxa.
Lokhu kuzokwazi ukukusiza ngohlangothi lwezinto zehadiwe. Uma ngabe idivayisi ingakwazi ukuthola ukufinyelela kukhompyutha yakho, ingahle iyeke ukusebenza. Yilapho izinhlelo zokuxazulula inkinga zingena khona. Isixazululi sezinkinga siqinisekisa ukuthi i-hardware ne-software yekhompyutha ziyahambisana.
Izikhathi eziningi kungenxa yokuthi umshayeli akabuyekezwa, okuholela kuzo zonke lezi zinkinga. Kuyindlela elula; udinga ukuchofoza umsebenzi ofuna ukuwuxazulula. Kungathatha umzuzu noma emibili, kepha inkinga yakho ingaxazululwa.
Indlela enhle yokuxazulula noma iyiphi inkinga ngokusebenzisa i-Youtube. Abanye abasebenzisi ngabe balayishe umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ukukuqondisa kwinqubo. Le ndlela izosiza njengoba uzobe ubuka ividiyo ezokusiza ngezindlela ezingcono. Ungalandela. Noma ikhompyutha yakho iqandisiwe, ungakwazi bukela ividiyo ku-Youtube kudivayisi yesibili bese uxazulula inkinga. Uzokonga imali eyengeziwe ongayichitha ngokuxhaswa ngobuchwepheshe. Okuhle kakhulu nge-YouTube ukuthi usizo olunikezwayo lukhululekile futhi lunembile.
5. Isinqamuleli sokhiye kuzicelo
Uma inkinga yakho ingasohlangothini lwesicelo, ungacindezela ukhiye we-F1 noma ukhiye we-Esc. I-F1 izokuhambisa ngokushesha uye kusayithi lokusekela lezinhlelo zokusebenza. Izinhlelo zokusebenza eziningi ze-Microsoft zisekela ukhiye we-F1. Ukusebenzisa lo khiye kuzinhlelo zokusebenza ze-Microsoft njenge-excel / Word noma i-OneNote kuzokusiza.
Noma kunjalo, ezinye izinhlelo zokusebenza azisekeli ukhiye we-F1; uma kunjalo, kuzoba ngcono ukuthi usebenzise ukhiye we-Esc. Ngemuva kokucindezela ukhiye we-Esc, hamba uye kuzilungiselelo zosizo. Futhi, funa isigaba sosizo kubhebhoni (imenyu); lonke uhlelo lokusebenza lunalo.
Lapho usanda kuqala lokhu, kuzokusiza kakhulu. Uhlelo lokusebenza lwamathiphu lwabaqalayo ababambeka kakhulu futhi abazi ukuthi baqale kuphi. Lolu hlelo lokusebenza lunikeza isethulo ngqo sendlela yokusebenzisa uhlelo lokusebenza. Qiniseka ukuthi uyakufunda lokhu ngaphambi kokuqala ku-OS yakho entsha. Kodwa-ke, uma ukuphuthele nganoma yiliphi ithuba, ungabathola kumenyu yokuqala. Cabanga ngalokhu njengesiqondisi kunokusekela. Kwesinye isikhathi izinto ezincane ezinomthelela emaphutheni amakhulu.
Ukunquma ukuthi yikuphi okuhle kakhulu:
Ngokuya ngesimo, i-hardware, noma isoftware, unganquma ukuthi iyiphi yezinyathelo ongazisebenzisa. Kodwa-ke, i-Youtube iyona engcono kakhulu yokusingatha zombili izinkinga ezingxenyeni ezingaphambili nezingasemuva. Futhi, ungalandela; lokhu kuzokusiza kakhulu. I-Youtube kungaba yisixazululo esihle kunanoma iyiphi inkinga. Indlela yesibili engcono kakhulu ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwamathiphu. Uhlelo lokusebenza lwe-Tips lunosizo olubonakalayo, oluzokukhombisa ngezinyathelo. Izinkinga zivame ukutholakala kuhlelo lokusebenza, yingakho-ke okungcono ongakusebenzisa kune-Amathiphu lokusebenza, olunikezwe yiMicrosoft.
Ekuphetheni, ukuthola usizo ku-Windows 10, kunezindlela eziningi. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhetha indlela efanele lapho uzokwazi ukuxazulula izingqinamba obhekene nazo. Kusukela ezikrinini ezibandayo ukuya kuzinhlelo zokusebenza ezingaqali, uzokwazi ukuthola izixazululo. Sifisa ukuthi ube nemibono yokuthi ungaluthola kanjani usizo ku-Windows 10. Uma uthole lokhu okuthunyelwe kunolwazi futhi uthole ukuqonda okuthile, beka imicabango yakho ebhokisini lokuphawula ngezansi.
I-Lovecraft Country Isizini yesi-2: Usuku Lokukhishwa: Sakaza Futhi Hlela Konke Odinga Ukukwazi!
Amabhange Angaphandle Isizini 3: Usuku Lokukhishwa: Ikhanseliwe noma Ivuselelwe?